Yangu iPhone X Inoramba Ichitangazve! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Iphone
maitiro ekubatanidza yako iphone kune yako printa
iphone x kaviri tinya kuisa
Sei iTunes isingakwanise kuwana yangu iphone
iphone 6 inopenya logo logo pane uye kudzima
Yangu iPhone X Inoramba Ichitangazve! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Yako iPhone X inoramba ichitangazve uye hauzive zvekuita. Iyo foni nyowani nyowani, uye yakanamatira mukutangisa zvekare. Iwe unoona iyo nhema skrini ine vhiri pakati, asi iko kungoita yako iPhone X kutendeuka, inodzoka kumashure mushure memasekondi makumi matatu. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone X ichiramba ichitangazve uye maitiro ekumisa iyo iPhone X restart loop zvakanaka.
iPhone X Inoramba Ichitangazve: Heino Iyo Kugadzirisa!
Yako iPhone X inoramba ichitangazve nekuda kwedambudziko re software. Vazhinji vashandisi vakashuma kuti dambudziko rinobva kune 'date bug' rakaitika Zvita 2, 2017. Seyakanaka seiyo iPhone inoshanda system iri, haina kukwana. Ndiani aiziva kuti wachi ichave chitsitsinho chayo?
Ndakafunga kunyora chinyorwa ichi mushure mekunge shamwari yangu yatumira mameseji kwandiri ichikumbira rubatsiro. Yake iPhone X yakatanga kutangazve mushure mekunge abaya mahedhifoni. Iri dambudziko harisi mhosva yako. Iwe hauna kuita chero chakaipa.
Kana iwe uri kuona iyo nhema skrini ine chena vhiri iri pakati pe iPhone yako X, kana kana yako iPhone X ichingoramba ichitangazve, iwe uri munzvimbo chaipo. Tichatanga nekugadziriswa kwakareruka uye totowedzera kuomarara sezvatinoenda.
maitiro ekugadzirisa imessage activation kukanganisa
Ini Ndomisa Sei Yangu iPhone X Kubva Kutangazve?
1. Edza Kugadzirisa Zvakaoma
Kugadziridza kwakaomarara ndiko kugadzirisa kuri nyore kwazvo kwatichavhara muchinyorwa chino. Kunyangwe hazvo isingashande kune vanhu vazhinji, ndicho chinhu chekutanga Apple techs kuyedza kuGenius Bar. Heano maitiro ekuomesa patsva yako iPhone X:
Kurumidza kudzvanya uye kusunungura vhoriyamu kumusoro bhatani.
Kurumidza kudzvanya uye kusunungura vhoriyamu pasi bhatani.
Dhinda uye bata bhatani repadivi kusvikira iyo logo yeApple yaonekazve pachiratidziro, wobva warega.
Hezvino izvo zvekuchenjerera: Vanhu vazhinji vane dambudziko rakaomarara kuseta yavo iPhone X vari kuita zvese nemazvo kunze kwechinhu chimwe chete: Ivo havabatise parutivi bhatani pasi kwenguva yakareba zvakakwana.
iphone 7 nhema screen asi ichiripo
Ita shuwa kuti kana iwe ukaomesa reset yako iPhone, unobata parutivi bhatani pasi kwemasekondi makumi maviri - pamwe rakareba kwenguva refu kupfuura iwe zvaunofunga iwe unofanirwa. Kana kuomarara patsva hakuna kukushandira, inguva yekuenda padanho rinotevera.
2.Kurumidza Dzima Iyo Setting Mune Notifications
Kugadziriswa kunotevera kwedambudziko iri, uye iro rinoshandira vanhu vazhinji, kushandura marongero muApp yeApp. Izvo zvine hunyengeri, hazvo - vanhu vazhinji vanongova nemaminitsi makumi matatu chete iPhone yavo isati yatanga zvakare! Kana pakutanga usingabudirire…
Vhura iyo Zvirongwa app pane yako iPhone X
Tinya Ratidza Zviratidzo
Mushure mekuchinja marongero, edza kuisazve iPhone yako zvakare. Kana ikamira kutangazve, zvakanaka. Kana zvisiri, ramba uchienda padanho rinotevera.
3. Nemaoko Chinja Iyo Zuva Kusvika Zvita 1, 2017
Kugadzirisa nekukurumidza kwe 'date bug' kutumira yako iPhone kumashure munguva - nzira yese kusvika Zvita 1, 2017. Enda ku Zvirongwa -> General -> Zuva & Nguva uye tinya switch yegreen kurudyi kweGadzira Chaizvoizvo kuti ubvise iyo.
chinodiwa kuroora zvakarongeka
Paunodzima Set Set Automatically, iro razvino zuva pa iPhone rinowoneka nebhuruu pazasi pemenu. Tinya pazuva kuti uvhure zuva rinotsvedza uye shandisa munwe wako kugadzirisa chinotsvedza kuti chiende Tue Dec 1 . Kuti upedze, tapiramukona yekumusoro kuruboshwe rekona.
4. Ongorora Kuti An iPhone Software Update
Apple inoburitsa madhigi ezve software software nguva dzese, uye dambudziko iri rinogona kunge rakagadziriswa nenguva yaunoverenga chinyorwa ichi! Kuti utarise software yekuvandudza, enda ku Zvirongwa -> General -> Software Kwidziridza . Kana iyo yekuvandudza ichibatika, iwe unozopihwa sarudzo yekumutora nekuimisa.
Dambudziko nemaitiro aya nderekuti kana yako iPhone ikaramba ichitangazve, hauzove nenguva yakakwana yekurodha nekuisa iyo gadziriso isati yatanga zvakare. Muchiitiko ichocho, inguva yekuvhara iPhone yako mukombuta yako uye kuita bhuku rekudzorera: Ndo zvatinozofukidza padanho rinotevera.
5. Isa Yako iPhone X Mune Yekudzoreredza Mamiriro Uye Dzosera
Kudzoreredza modhi yakakosha, 'yakadzika' mhando yekudzoreredza iyo inodzima zvese zviri pa iPhone yako uye inoipa iyo nyowani kutanga nekudzoreredza iOS kubva pakutanga. Inogadzirisa rinenge rese dambudziko re software, asi haina kunaka.
Kudzorera yako iPhone uye kuimisa zvakare zvakare nyore kana uine iCloud kana iTunes backup. Mushure mekunge yako iPhone idzorere, iwe unozogona kusaina neApple ID yako, kudzoreredza kubva kune yako backup, uye iwe unenge watodzoka chaiko kwawakasiya.
iphone yemunhu hotspot isiri kuratidza
Kana iwe usina backup, zvisinei, iwe unogona kupedzisira warasikirwa nemifananidzo, mameseji, uye zvimwe zvese zviri pane yako iPhone. Zvinogona kunge zvakakodzera rwendo kuenda kuApple Chitoro kana iwe usiri kuda kurasikirwa nemapikicha ako - asi hapana vimbiso yekuti ivo vachakwanisa kuzvigadzirisa futi. Dzimwe nguva Kudzosera Mamiriro Ekudzoreredza chinhu chakakosha.
Iwe unozoda kuwana Mac kana PC kudzorera yako iPhone X. Haifanirwe kunge iri yako Mac kana PC - isu tiri kungoshandisa iTunes sechishandiso kurodha software nyowani ku iPhone yako. Heano maitiro ekuisa yako iPhone X mune yekudzosa maitiro uye kudzoreredza.
Vhura iTunes pane Mac yako kana PC kana yakavhurika.
Unganidza yako iPhone kune Mac yako kana PC uchishandisa Mheni (USB charger) tambo.
Dhinda uye bata bhatani rerutivi kudzamara meseji yaonekwa muTunes iyo inoti iPhone yaonekwa mukudzosa mode.
Tevera rairo mu iTunes kudzorera yako iPhone.
Kana uine iCloud negadziriro yeparutivi, shamwari yekombuta, kana iwe usina iCloud negadziriro yeparutivi, unogona patsanura iPhone yako kubva komputa yako mushure mekudzorera kwapera uye yako iTunes inoti 'Welcome to your new iPhone'. Chenjera kuti usabatanidze yako iPhone usati waona iwo meseji, kana zvinhu zvikaenda zvisizvo.
Kana iwe uchine dambudziko ne iPhone yako, tarisa chinyorwa changu chekutanga chinonzi Nei yangu iPhone Ichiramba Yotangazve? kune yakazara nzira yekugadzirisa dambudziko iri kune yega iPhone.
iPhone X: Kwete Kutangazve Zvekare!
Izvozvi kuti yako iPhone X yamira kutangazve, unogona kudzokera kunonakidzwa nezvose zvayinofanira kupa. Kana chinyorwa ichi chakakubatsira iwe, chigoverana neshamwari dzako! Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo, siya mhinduro pasi pazasi uye ini ndichakubatsira iwe nekukurumidza sezvazvinogona.